यी अक्षरबाट नाम शुरु हुने युवतीहरु हुने गर्छन् पवित्र ! साथै हुने गर्छन् सुन्दर अनि भाग्यमानी पनि !
बैशाख ०४, २०७६ PS
आज हामी तपाईहरुलाई कस्ता महिलाहरु बढी पबित्र हुन्छन भन्ने कुरा बताउन जाँदै छौ । नेपाली वर्णमाला अनुसार ४ अक्षर बाट नाम सुरु हुने केटीहरु बढी पबित्र हुने कुरा बताइएको छ । यी ४ अक्षर बाट नाम सुरुहुने व्यक्तिहरु परिवारमा सबैको रोजाईमा पर्ने र समाजमा पनि आफ्नो नाम कमाउन् सक्छन ।
“R” बाट नाम सुरुवात हुने केटीहरु एकदम सुन्दर र भाग्यमानी हुने गर्छन । उनीहरु जस्तोसुकै वाताबरणमा पनि रमाउन जान्दछन् । यी महिलाहरु सधैं आफ्नो पति र परिवारको इज्जत जोगाउन सधै साथमा रहने गर्छन । यिनीहरु आफ्नो परिवारमा सधैब खुशी राख्न तल्लिन हुन्छन ।
“T” बाट नाम सुरुहुने महिलाहरुले समाजमा भलाई कामका बापत धेरै सम्मान पाउने गर्छन । उनीहरु सधै सबैलाई खुशि राख्न सक्छन । यी महिलाहरु धेरैनै सुन्दर र भाग्यमानी हुन्छन । उनीहरु बिहे पश्चात आफ्नो श्रीमानको घरमा आफ्नो शासन जमाएर बस्न सक्छन।
“P” बाट नाम सुरुहुने महिलाहरु धेरै भाबुक र छिटै रिसाउने स्वोभाबका हुन्छन । यी महिलाहरुको मुख्य विशेषता भनेको आफ्नो कर्तब्य लाई बुजेर त्यसलाई वहन गर्ने क्षमता यीनमा हुन्छ जसको कारण उनीहरुलाई पबित्र मान्ने गरिन्छ । यो अक्षर् बाट नाम सुरुहुने केटीहरु हरदम आफ्नो परिवारको ख्याल गरि जुनसुकै काममा साथ दिने गर्छन ।
ये नाम की लड़कियां होती हैं सबसे ज्यादा पवित्र , जानिए किस अक्षर से होता है इनका नाम शुरू !
प्रकाशित : बुधबार, बैशाख ०४, २०७६१०:२६
पुरुषको भाग्य चम्क्याउने युवती यस्ता हुन्छन